Tag: coupon kudzikinura | Martech Zone
Tag: coupon kudzikinura
Chishanu, July 18, 2014 Douglas Karr
Wow - pandakangoona iyi infographic kubva kuVoucherCloud, inotungamira voucher yeUK uye saiti yekubvisa, ndakaziva kuti ndaifanira kuigovana! Iyo infographic ndeyekutarisa kwakazara pazvitoro zvekutengesa, nzira dzevavhoti, makadhi ekuvimbika uye coupon kushambadzira akanyanya maitiro evatengesi. Iyo inopa chimiro chemushandisi wemaponi, matipi uye manomano ekugadzirisa ako makwikwi, uye toni yemienzaniso kubva kune vanotungamira vatengesi. Chandinonyanya kufarira chirevo ichi
Google iri kuwedzera kusvika kwayo mukuparadzira coupon yedhijitari neZavers. Zavers inogonesa vatengesi kuti vawane iwo akakodzera makoni kune vatengi chaivo, kuwedzera zvirongwa zvemubairo, uye kuteedzera kudzikunura mune chaiyo-nguva. Vatengi vanowana zvigadzirwa zvemugadziri pamawebhusaiti avo avanofarira uye vanowedzera makadhi edhijitari kumakadhi avo epamhepo. Kuchengetedza kunoitiswa zvoga pakubuda apo vatengi pavanotsvaira kadhi ravo remubairo kana kunyora manhamba avo efoni - hapana kuongorora kana kuronga kwemuviri